Semalt Fornece As Forms Mais Eficazes De Publicidade Que Levará A Respiração Dos Seos Clientes!
Kuzvibata kwevatengi kwakaguma kuva mamiriro asingakanganwiki apo matanho ekugadzira aigona kuiswa kune web browser. Nenzira chaiyo, vatengi vakanga vasina kudzivirira matanho asi vaiva nechimwe chinhu mupfungwa. Izvi ndizvo zvaiitika - spyware yezvombo inoshandiswa sezviziviso zvakaparadzwa zvombo zvehurongwa, dzakaona basa ravo uye dziba data yega. Vakanga vasiri matanho imwe chete asi mavhairusi aifanira kudziviswa - camara reflex digital o analogica.
Fungidzira kana izvozvo zvaizoitika munyika chaiye. Sezvakangoita patinenge tine mhepo yekuti Visio TV dzaiunganidza deta uye dzichiitengesa kune vamwe vatatu. Izvozvo zvakanga zvisina kuparidzirwa. Yakanga isina mutemo. Yakanga ichirwara, uye Icho chaifanira kurangwa. Zvakaratidzwa zvakabhadhara mamiriyoni zvekukuvara uye kudzura kuputika. Mutengi ane kodzero yekudzivirira iye pachake intrusive spyware.
Heino mazano anotsanangurwa naMichael Brown, Semalt Mutengi weKuteresi Achibudirira iyo inobatsira pakugadzira mishandirapamwe yemhosva inotarisirwa iyo inogamuchirwa zvakanaka.
Shandisa kugadzira zviratidzo
Chiziviso chinonyadzisa chimwe chinokanganisa maonero chinhu chikuru. Fungidzira ichi: iwe urikuverenga bhuku rinonakidza ipapo chimwe chinhu chinokumanikidza kuti uchitarise. Iwe unoda kuuya nechimwe chinhu icho vanhu vakwezva. Fungidzira ichi chienzaniso: iwe une mureza unomira pamusangano. Sezvazviri, dumba rako rave kutoonekwa..Iwe haufaniri kuzviita hukuru kuitira kuti huvhare mukana. Pane kudaro, tora tende rakagadzirirwa rinokwezva ziso.
Kutengeswa kweNonlinear hakusi kudarika kubata shoko uye nezvimwe pamusoro pekuchekachitupa muhupenyu hwevatengi. Ndiyo nzira Starbucks uye Redbull tsika. Iko inoshandiswa kutengesa kuenderera mberi inotanga ne kuziva nezvechidikanwi uye kunopera kana kutengeswa kuchiitwa. Zvisinei, munyaya yekutengeserana kusina kukwana, mararamiro ezvinyorwa anouya pakutanga. Itinogutsa vatengi vako kuti vaite chikamu chehupenyu hwavo. Zvimwe zveTV nemasereti hazvizivikanwi nekuda kwevakawandaads ads they run. Izvo zvinoshandawo kune mamwe mawebsite.
Iwe haufaniri kunge uine sneaky kana uchiuya pakushambadzira kwevanhu. Ichokwadi chokuti arubatsiro ruri kutaurwa mumharidzo harurevi kutendeseka kwezviri mukati. Kana chimwe chinhu, chinoita kuti zvinyorwa zvionekwe chokwadi. Nenzira iyi, vateereri vanonyatsoziva muganhu wemushambadziri.
Heino chokwadi chechinhu chacho. Mhando dzose dzevhidhiyo dzinotungamirirwa nekutengesa. Kana nokudamuenzaniso, sopu opera inotora programming kusvika pamwero vanotsigira vasingadi, vanongodzinga kunze vachitora madhora avo navo. Nhau yekuparidzira inobhadharwa nevashambadziri. Izvo zvakashambadzira zvekugadzirwa kwemashoko zvinoderedza basa revatengesi. Izvo sandboxed mudiki taura kuti izvo hazvipindi kukanganiswa kwezviri mukati, taura sese opera. Zviri nani kutarisa vanhu vamunofarira mafirimu svinga shandisa Coke kana shandisa Nikon kamera panzvimbo pokumisa pakananga uye shandisa Nikon kana coke ad.
Mukupedzisa, kubatanidza kugadzira zviratidzo, kushambadzira kusina kukwana, uye kutengeswa kwevanhundiyo mvumo yekutsvaga iyo vateereri vako vasingazodziviriri. Ndizvo zviri nyore.